मुसलमानलाई सहयोग गर्न हुन्न आन्टी… — Nepal Sarokar
Posted on December 30, 2016 by Nepal Sarokar
आर्थिक रुपमा विपन्न भएपनि सांस्कृतिक र सहिष्णुतामा हामी नेपालीहरु धनि छौं । विभिन्न धर्म र ती धर्मभित्रका विभिन्न जातजातिहरुको विविधताले गर्दा नै थुप्रै चाडपर्वहरूको बहानामा खुशी साटासाट गर्ने मौकÞा पाउछौ । तर पछिल्लो समय, धर्म र जातीयतालाई लिएर यो खुशी धेरै फैलिन पाएको छैन । भर्खर गएको क्रिसमस पर्वमा , हिन्दू हूँ र ईसाई हूँ भन्नेहरुको भनाभनले सामाजिक संजालका भित्ताहरु रंगिए ।
म हिन्दू धर्मको पृष्ठभूमिमा रहेकोले, क्रिसमसको शुभकामना दिइरहदा मजाक र प्रश्न उब्जे । म न त कुनै धर्मको मान्छे हूँ भनेर गर्व गर्छु, न त कुनै धर्मको उपहास नै । म हिन्दू धर्म मान्ने बाबाआमाबाट जन्मिए । मेरो घरमा वेद, रामायण, स्वस्थानी, सत्यनारायण कथाका किताबहरु पढि़ए तर मलाई कहिल्यै नमाज, बाइबल, आदि अरु धार्मिक ग्रन्थहरुलाई घृणा गर्नु भनेर सिकाइएन् । न त मेरा आमाबाबाले, न ती किताबमा लेखिएका श्लोक र उपदेशहरुले ।
एक अर्कालाई नीचो देखाउने होडमा हामी घृणा र आलोचनामा यति व्यस्त भइसकेका छौं कि, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरुमा भएका, राम्रा मूल्य मान्यताहरुलाई, संस्कारहरुलाई, आफ्नोपनलाई ओझेलमा पार्दै नकारात्मक छाप बढाइरहेका छौं ।
कुनै पनि धर्म,जात आफैमा खराब हुँदैन । कुनै पनि धर्मले मेरो अनुयायी बन र अरुलाई घृणा गर भन्दैन न त कुनै धर्मले वर्ग छुट्टाएर भेदभाव गर भन्छ । गलत त हाम्रो सोंच हो,खराब त धर्मका नाममा फैलाइएका अफवाहहरु हुन, गलत त धर्मको नाममा गरिने व्यापार हो, चाहे त्यों जुनसुकै धर्म होस् । किनकि सबै धर्मको सार एउटै हो , “मानवता“ । म चाहन्छु, भोलि मेरा सन्तानहरुले, कुनै धर्मलाई अँगाल्नु भन्दा पाहिले, मानवताको धर्मलाई अंगालून् । धर्मको नामले परिचय दिनुभन्दा पहिले , आफू मानव हुनुको परिचय दिऊन् ।
गलत त हाम्रो सोंच हो,खराब त धर्मका नाममा फैलाइएका अफवाहहरु हुन, गलत त धर्मको नाममा गरिने व्यापार हो, चाहे त्यों जुनसुकै धर्म होस् । किनकि सबै धर्मको सार एउटै हो- ‘मानवता’ ।
बौद्ध धर्मालम्बी र इस्लाम धर्म अनुयायीहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी बेवास्ता गर्न सक्छु म ? जहां मलाई आफ्नै पारिवारिक नाता सरह माया र सहयोग मिलिरहेको छ । मेरी आमाले मलाई एउटा घटना सुनाउनुभएको थियो, आमा र दिदी काम विशेषले बाहिर गएर घर फर्किने क्रममा, एक मुसलमान बृद्ध भेटिए जो पाकिस्तानबाट आएका रहेछन् । ऊनि बाटो नचिनेर बसेका रहेछन् र गाडी भाडाको लागि पर्याप्त पैसा पनि रहनेछ । त्यों सुनेर आमाले गन्तव्य पनि एकै ठाउँ भएकोले ट्याक्सीमा सँगै जान आग्रह गर्नुभएछ .. ऊनि यति कृतज्ञ भएछन् कि बाटोभरी धन्यवाद दिदै, हाम्रो परिवारको लागि अल्लाहसँग दुवा माग्न थालेछन । उनी ओर्लिएपछि , ती ट्याक्सी ड्राईभरले , “ यस्ता मुसलमानलाई सहयोग गर्न हुन्न आन्टी “ भनेछन । ती चालक बुद्ध धर्मालंबी थिए । के साच्चै बुद्धले कसैको सहयोग नगर्नु भन्ने उपदेश दिएका होलान ? कुनै धर्म,जाति बिशेष छुट्टाएर मात्र सहयोग गर्नु भनेका होलान ? मानवताको धर्म निभाउना सकिँदैन भने, म फलानो धर्मको भनेर घमण्ड गर्नुको तुक रहला केहि ?
कामको सिलसिलामा म मकवानपुरको एउटा गाउँमा पुग्दा, त्यस गाउँका सबैजसो गाउँलेहरु हिन्दू र बौद्ध धर्म त्यागेर ईसाई धर्म अँगालेका थिए । उनीहरुले हाम्रो समूहलाई गरेको आतिथ्यता, त्यों सद्भाव र मायालाई कसरी घृणा गर्न सक्छु म ? एकजना दाइलाई मैले सोधेकी थिएँ ,“ ईसाई धर्ममा तपाईले के विशेष देख्नुभयो ? “ वहाँले भन्नुभएको थियो ,“ मेरो थर परियार हो , मेरो लागि मन्दिर सधै बन्द थियो तर चर्च सधै खुल्ला थियो, त्यसैले चर्चमा गएँ । “
आफ्नो स्वविवेकले धर्म अँगाल्नु अधिकार हो भने जबरजस्ती या त भ्रम फैलाएर आफ्नो धर्ममा तान्नु अपराध हो । सकिन्छ “मानवता“ लाई फैलाऊं , सकिदैन, आफूले अँगालिरहेको धर्मको राम्रा कुराहरुलाई फैलाऊं, नराम्रा कुराहरुलाई परिमार्जन गर्दै लैजाऊं ।
अन्त्यमा, रिस राग भुलेर,दैनिक कार्यबाट फुर्सद निकाली मुस्कुराउन , खÞुशी बाँड्न सिकाउने विभिन्न धर्म र जातजातिले मनाउने पर्वहरुको लहरमा आइपुगेको गुरुङ समुदायको तमु ल्होछारको सबैलाई आँशीमाला !